ပါကစ္စတန်တွင် သားနှစ်ဦးမှ မိခင်အရင်းအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ် | မျိုးမြန်မာ
ပါကစ္စတန်တွင် သားနှစ်ဦးမှ မိခင်အရင်းအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်
Posted by myomyanmar on June 5, 2014
Posted in: သတင်း.	Tagged: Killed Mother.	Leaveacomment
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် သူမ၏ ဒုတိယအိမ်ထောင် သေဆုံးသွားသောအခါ ခိုကိုးရာမရှိတော့၍ သူမ၏ ပထမအိမ်ထောင်နှင့် ရခဲ့သော သားနှစ်ယောက်ထံသို့ အတူနေရန် ပြန်လာမည်ဟု ၎င်းတို့ထံ စကားကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုသားနှစ်ယောက်မှ ထိုကမ်းလှမ်းမှုကို လက်မခံပဲ ဇွန် ၂၊ တနင်္လာနေ့က ၎င်းတို့၏ မိခင်ထံ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ဝရန်တာ၌ ရပ်နေသော မိခင်အား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်လိုက်သည်။
ကာနိဇ်ဘီဘီ၊ အသက် ၅၂ နှစ်။ သူမ၏ ဒုတိယအိမ်ထောင် အာမက် သေဆုံးသွားသဖြင့် ပထမအိမ်ထောင် နှင့် ရခဲ့သော သားနှစ်ဦးထံ သွားနေရန် စီစဉ်သည်။
ဘီဘီ နှင့် ရဘ်နာဝတ်ဇ် တို့ လွန်ခဲ့သော ၃၄ နှစ်က လက်ထပ်ခဲ့ပြီး မိုဆင်းနှင့် အမ်မရန်ဟူသော သားနှစ်ဦး ရရှိပြီးနောက် ကွာရှင်းခဲ့ကြသည်။
မိခင်ဖြစ်သူမှ ၎င်းတို့ထံ လာနေလိုကြောင်း ခွင့်တောင်းသောအခါ မိုဆင်းနှင့် အမ်မရန် ညီအကိုမှ ၎င်းတို့၏ မိခင်သည် ၎င်းတို့၏ ဖခင်အား ထားခဲ့ကာ ဒုတိယအိမ်ထောင်ပြုသွားသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူ ၎င်းတို့ထံ ပြန်လာမည်ကို လက်မခံနိုင်ဟု ဆိုကာ မိခင်ဖြစ်သူရှိနေရာကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်၍ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။
Two brothers shot and killed their mother on Monday after she insisted on coming to live with them after the death of her second husband.
The woman had separated from her first husband 30 years ago. Police said Kaneez Bibi, 52, had married Rab Nawaz,aresident of Shorkot 34 years ago. The couple had two sons, Mohsin and Imran but had separated later. Bibi had marriedasecond time. The police identified her second husband as Ahmed. After Ahmed’s death, Bibi had conveyed to her sons that she wanted to come back to them, the police said, adding her sons had said that they did not want her back and she was dead to them because she had left them and their father for another man. On Monday, Bibi was standing outside her house when her sons arrived there onamotorcycle and shot her, the police said. She died on the way to hospital.
← Apple Computerနှင့်Pixar Animation Studio တို့ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် Steve Jobs ပြောကြားခဲ့သည်မှတ်သားဖွယ်မိန့်ခွန်း
မုဒိမ်းမှုတွေပေါတယ် ထောတယ် ကုလားရှိရာ ဌာနေဝယ် →